SOMALILAND:Ganacsato Turkiga ka Socda Oo Booqasho Ku Yimid Somaliland - Wargane News
Home Somali News SOMALILAND:Ganacsato Turkiga ka Socda Oo Booqasho Ku Yimid Somaliland
Wefti balaadhan oo ka socda dalka Turkey oo iskugu jira siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa maanta booqasho ku yimid Jamhuuriyadda Somaliland.
Weftigan ka socda dalka Turkey ayaa waxa madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay Wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil C/laahi Axmed, Wasiir ku xigeenka Ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Bashiir Cabdi Xariir iyo agaasimaha guud ee wasaarada warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Maxamed Cilmi Aadan.
Wasiir Ku xigeenka Ganacsiga oo ka hadlay ujeedada socdaalka weftigan waxa uu yidhi “Weftigan balaadhan oo ah ganacsato ka socda shirkadaha ugu waaweyn ee dalka Turkey ee Islaamka ah ee walaalaheen ah, shirkadahaas oo dalkeena u yimid inay maalgashadaan Somaliland oo ka faa’iidaystaan.
Shirkadahaas oo ay ka mid yihiin shirkadda isgaadhsiinta ugu wayn ee dalka Turkey shirad ka socota xaga tamarta iyo shirkado kale oo ganacsiga ah.”
Wasiir Ku xigeenku waxa uu tilmaamay in Somaliland soo jiidatay beesha caalamka kuna aaminaan hantidooda, waxaanu yidhi “Waynu ognahay baahida aynu u qabno maanta marxalada ay Somaliland marayso oo ah in aynu soo jiidano indhihii beesha caalamka oo aynu noqono dalalka lagu aamino hantida shisheeye ee la maalgashado si ay horumar intan ka balaadhan aynu u samayno.”
Wasiir Bashiir Cabdi Xariir waxa ku dooday in siyaasada xukuumadu tahay in la kasbado oo la dhiirigeliyo maal-gashadeyaasha caalamiga ah.
Mr. Maxamed oo ku hadlayay magaca weftigan ka socday dalka Turkey, ayaa waxa uu u mahad-celiyay sida loogu soo dhaweeyay Somaliland, waxaana uu sheegay in xidhiidh ganacsi la samayn doonaan Somaliland kaasi oo khuseeya dhinacyada tamarta iyo isgaadhsiinta.
Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo ka qaybgalay munaaasibad lagu xusayo Sannad-guuradii labaad ee Idaacadda Qur’aanka